Gadget – Page 46 – Myanmar Mobile App
တရားဝင် launch လုပ်တဲ့အချိန်မရောက်သေးဘဲ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေ ပေါက်ကြားသွားတိုင်း ဟာသကြီးဖြစ်ကျန်ခဲ့တာ ထုံးစံပါပဲ။ U11 EYEs ဟာ Evan Blass ထုတ်ဖော်လိုက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတည်းက သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပေါက်ကြားမှုသာရှိပေမယ့် အရာအားလုံးကိုတော့ ပြောပြထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ HTC ရဲ့ အမှားတချို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ U11 EYEs ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အပြည့်အ၀သိခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ U11 EYEs ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကတော့ ၆လက်မ 1080p Super LCD3 display ကို 18:9 အချိုး၊ Snapdragon 652 ၊ 4GB RAM ၊ 64GB မမ်မိုရီနဲ့အတူ microSD ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း၊ 3,930mAh ဘတ်ထရီ၊ IP67 ၊ […]
Posted on January 18, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on HTC U11 EYEs ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်များ
ကွေးခေါက်လို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်မျိုးကို CES 2018 မှာတိတ်တဆိတ်ပြသခဲ့တဲ့ Samsung
Samsung ဟာ CES 2018 ပွဲမှာ အားလုံးမျှော်လင့်ခဲ့သလို Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြဿခဲ့ခြင်းမရှိပဲ အိမ်သုံး Electronic Smart Product များဖြစ်တဲ့ Smart TV များ ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် အခြား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသာ မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် CES မှာသီးသန့်ကျင်းပတဲ့ Private Meeting မှာတော့ ကွေးခေါက်လို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး အဆိုပါဖုန်းရဲ့အမည်ဟာ Foldable Smartphone လို့ခေါ်တွင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဒီလိုကွေးနိုင်ခေါက်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းနည်းပညာဟာ အခုမှထွက်ပေါ်လတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Samsung ရဲ့ရှေ့မှာ LG နဲ့ Lenovo တို့ရဲ့ Foldable Smartphone တွေရဲ့ရှေ့ပြေးနမူနာဒီဇိုင်းနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Online Video တွေကတစ်ဆင့် မကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်ဖူးနေကြဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အထိတော့ […]
Posted on January 18, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on ကွေးခေါက်လို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်မျိုးကို CES 2018 မှာတိတ်တဆိတ်ပြသခဲ့တဲ့ Samsung
Xiaomi Mi Max3ကို Dual Camera ဖြင့်တွေ့မြင်ရဖွယ်ရှိ
Xiaomi ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကြီးမားပြီး Battery အသုံးခံတာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ Mi Max Series ဟာ ယခုအခါမှာ တတိယမြောက်မျိုးဆက်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်သမျှစမတ်ဖုန်းတိုင်းလိုလို Dual Camera ပါဝင်လာတဲ့ ယနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းလောကမှာ မကြာခင်မှာ အသစ်မိတ်ဆက်မဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi Max3မှာလည်း Dual Camera ပါဝင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်တလောပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းတွေအရ Mi Max3မှာ Snapdragon 635 Chipset ကိုထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်အကျယ် ၆.၉၉ လက်မ (၇) လက်မအရွယ် Full HD+ Display ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် ပုံစံကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းထွက်ဖုန်းတွေလို 18:9 Full Screen Display အမျိုးအစားနဲ့လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် […]
Posted on January 18, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on Xiaomi Mi Max3ကို Dual Camera ဖြင့်တွေ့မြင်ရဖွယ်ရှိ
OnePlus3နဲ့ 3T မှာ Face Unlock နည်းပညာစတင်ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမှ OnePlus3နဲ့ 3T ဖုန်းတွေအတွက် Face Unlock နည်းပညာ အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေရာမှ ယခုအခါမှာတော့ လက်တွေ့အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus 3/3T အတွက် OxygenOS Beta Update မှာစတင်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်စဲကာလဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် Stable ROM အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့တော့ ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိဦးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ OnePlus 3/3T တို့အတွက် ယခုထွက်ရှိထားတဲ့ OxygenOS Open Beta Update ကို စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ Link မှတစ်ဆင့် Download ရယူကာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ File Sizee ကတော့ 1.6GB ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းအသုံးပြုတွေအနေနဲပလက်တလောမှာတော့ မြန်မာဖောင့် ( Zawgyi )ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ Replace ပြုလုပ်လို့မရနိုင်သေးတဲ့အခက်အခဲတော့ကြုံတွေ့နေရကြရပါတယ်။ဒါ့အပြင် အခြားသော User […]
Posted on January 18, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on OnePlus3နဲ့ 3T မှာ Face Unlock နည်းပညာစတင်ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်
လျှပ်စစ်မလို၊ ဘတ်ထရီမပါဘဲ ၀ိုင်ဖိုင်ချိတ်နိုင်တဲ့ gadget လေးများ
Zawgyi Version မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပဲ နည်းပညာတွေဟာ အခန်းတစ်ခန်းစာလောက်ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကနေ လက်ဖ၀ါးသာသာရှိတဲ့ ကြိုးမဲ့ပစ္စည်းတွေအဖြစ်ကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ အခုဆိုရင်လည်း ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေဟာ လျှပ်စစ်မလိုပဲ ၀ိုင်ဖိုင်ချိတ်နိုင်စေဖို့ gadget လေးတွေကို စမ်းသပ်နေပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီပစ္စည်းလေးတွေကို 3D print ထုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘတ်ထရီတွေ မပါတော့ဘူး သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကအသံကို ဘတ်ထရီမလိုတဲ့ ကိရိယာလေးနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်? ဒါမှမဟုတ် ကီးချိန်းမှာတပ်လို့ရတဲ့ ခလုတ်လေးနဲ့ မီးဖွင့်၊ပိတ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်? ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာကုန်နေပြီဆိုတာ သင်မသိသေးခင်မှာ အလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်? ဒါတွေအားလုံးကို ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ် Networks & Mobile Systems ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးပါပြီ။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကြိုးမဲ့ sensor တွေကို 3D print ထုတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ widget တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ အခြားသောဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ […]
Posted on January 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on လျှပ်စစ်မလို၊ ဘတ်ထရီမပါဘဲ ၀ိုင်ဖိုင်ချိတ်နိုင်တဲ့ gadget လေးများ
Posted on January 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on ယခုတလော စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်ဆုံး App (၅) ခု
Google ရဲ့ Arts & Culture app က သင်နဲ့တူတဲ့ အနုပညာရှင်ကိုဖော်ပြပေးနိုင်
သင့်ရဲ့ portrait ပုံကို သိမ်းထားတဲ့ ပြတိုက်တချို့ရှိနေမလားဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ၁၆ရာစုနှစ်တုန်းကအ၀တ်အစားတွေနဲ့ သင်ပုံစံကိုမြင်ချင်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သင်ဟာမိုနာလီဇာဝင်စားတဲ့သူများ ဖြစ်နေလေမလားဆိုပြီး သံသယ၀င်ဖူးသလား။ ဒီအချက်တွေကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သက်သေပြနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမေးခွန်းပေါင်းများစွာက သင့်ကိုညဘက်အိပ်ရေးပျက်နေစေသလား။ ဒီအရေးတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ Google ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေက လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ရော သင်ပျော်လောက်သွားပါတယ်။ Google ရဲ့ Arts & Culture app ဟာ တကယ်တော့ ပညာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်က update ကတော့ သူ့ကို selfie-matching game အဖြစ် ပြောင်းသွားစေပါတယ်။ Google ရဲ့ face-recognition algorithm တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ အဲဒီ app ဟာ […]
Posted on January 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on Google ရဲ့ Arts & Culture app က သင်နဲ့တူတဲ့ အနုပညာရှင်ကိုဖော်ပြပေးနိုင်
ZTE ဟာ 5G နည်းပညာ အသုံးပြု ပထမဆုံး ဖုန်း ဖြစ်လာဖွယ်ရာ ရှိနေ
ZTE ဟာ ၂၀၁၉ အစောပိုင်းမှာ 5G စမတ်ဖုန်းကို ယူအက်စ်ဈေးကွက်တင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ZTE မှာ CES 2018 ပွဲကို ပြသဖို့တစ်ခုမှမရှိပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာ ယူအက်စ်ဈေးကွက်အတွက် စီမံကိန်းအကြီးစားကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ Bloomberg နဲ့အင်တာဗျူးမှာ ZTE ရဲ့ အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Lixin Cheng ဟာ 5G ထောက်ပံ့ပေးနိုငတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ယူအက်စ်ဈေးကွက်အတွက် ၂၀၁၈ အဆုံးပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၉အစောပိုင်းမှာ ဖြန့်ချိပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်အတိုင်းအတာဟာ လာမယ့်လတွေမှာ 5G network ရဲ့မြန်ဆန်တိုးတက်မှုအပေါ် မူတည်နေတာကတော့ ငြင်းမရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးဆုံး carrier နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Verizon နဲ့ AT&T ကတော့ 5G network […]
Posted on January 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on ZTE ဟာ 5G နည်းပညာ အသုံးပြု ပထမဆုံး ဖုန်း ဖြစ်လာဖွယ်ရာ ရှိနေ
Google PlayStore ရဲ့ ကလေးဂိမ်း ကဏ္ဍမှာ Porn App တစ်ခု ရောက်ရှိနေ
GooglePlya Store မှာရှိတဲ့ App တွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူတွေဟာ ၄င်း PlayStore မှာရှိတဲ့ ဂိမ်း၆၀ ခန့်လောက်မှာ Mwlware တွေပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Malware တွေထဲကမှ အဆိုးဆုံးတစ်ခုကတော့ AdultSwine ဆိုတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပြီး Google က သီးသန့်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ကလေးဆော့တဲ့ Game တွေ Download ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ App ဟာ Download ဆွဲလိုက်တဲ့ ဂိမ်းအချို့နဲ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းပေါ်မှာ အလိုလျှောက် Install ပြုလုပ်မှာဖြစ်ကာ အသုံးပြုသူအား Pop-up ads တွေနဲ့မြူဆွယ်ဖျားယောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ၄င်းတို့ရဲ့ Premium Service ကို ငွေပေးသွင်းပြီး Register ပြုလုပ်ခိုင်းတဲ့အထိ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရပါတယ်။ နောက်ထပ် ဆိုးဝါးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ Virus […]
Posted on January 17, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on Google PlayStore ရဲ့ ကလေးဂိမ်း ကဏ္ဍမှာ Porn App တစ်ခု ရောက်ရှိနေ
သီချင်းဆိုနိုင်တော့မယ့် Google ဖုန်းမျက်နှာပြင်များး
Google ဟာ စမတ်ဖုန်းscreen တွေကို စပီကာတွေလို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေဖန်တီးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုပါးလွှာတဲ့ဖုန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ဘတ်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်လာတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Redux ကိုဝယ်ယူမှုဟာ မနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် လူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ screen ကို တုန်ခါစေပြီးတော့ အသံထုတ်လုပ်မယ့် နည်းပညာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ၀ိုင်ခွက်ရဲ့အစွန်းကို ပွတ်တိုက်ပြီး အသံထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်သလိုပါပဲ။ အရင်တုန်းက ပြသခဲ့တဲ့သရုပ်ပြသမှုတွေမှာတော့ နားထောင်သူတွေအနေနဲ့ အသံကို ကောင်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးကတော့ လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ စပီကာတွေအတွက် နေရာမပေးရအောင် လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်ထရီအတွက် နေရာပိုကျယ်လာတာမျိုး၊ အစိတ်အပိုင်းအသစ်တွေအတွက် နေရာကျယ်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Google အနေနဲ့ Redux ရဲ့ နည်းပညာကို […]
Posted on January 16, 2018 Author myanmarmobileapp	Comments Off on သီချင်းဆိုနိုင်တော့မယ့် Google ဖုန်းမျက်နှာပြင်များး